Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Etihad Airways dia nandefa sidina nankany Wina, Aotrisy
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Austria • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Ny serivisy vaovao dia noraina ara-potoana mba hahatongavanao vao maraina any Wina mba hanomezana fitsangatsanganana an-tsakany sy an-davany ireo mpivahiny eo anelanelan'i UAE sy i Austria.
Etihad Airways dia nanambara sidina vaovaon'i Vienna amin'ity fahavaratra ity.
Ny serivisy dia hiasa indroa isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny Dreamliner Boeing 787 manomboka ny 18 Jolay 2021.
Misokatra ho an'ny teratany sy ny mponina ao Aotrisy ary ny mponina ao amin'ny fanjakana mpikambana ao Schengen, mpivahiny sy mpianatra.
Etihad Airways, ny kaompaniam-pirenen'i UAE, dia handefa sidina mankany Viena amin'ity fahavaratra ity. Ny serivisy dia hiasa indroa isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny Dreamliner Boeing 787 manomboka ny 18 Jolay 2021.
Ireo mpizaha tany mitsidika an'i Wina dia hankafy kolontsaina taloha sy fahitana manaitra. Ny renivohitr'i Aostralia dia voafidy hatrany ho tanàna azo honenana indrindra eto an-tany.
Hanatsorana ny traikefa amin'ny dia ary hanome fiadanan-tsaina fanampiny, Etihad Airways natomboka vao haingana Verified to Fly, ahafahan'ny vahiny manamarina ny taratasin-diany Covid-19 alohan'ny hahatongavany amin'ny seranam-piaramanidina.
Ireo mpitsangatsangana mampiasa Verified to Fly dia afaka mankafy fidinana an-dalambe haingana any amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny birao voatokana ho an'ny Verified to Fly hahazoana traikefa haingana sy malefaka kokoa.
Ny manidina, avy, ary amin'ny alàlan'i Abu Dhabi dia tohanan'ny fandaharanasa fanadiovana sy fiarovana tanteraka ny zotram-piaramanidina, Etihad Wellness, izay miantoka ny fari-pahaizana ambony indrindra amin'ny fahadiovana isaky ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpanjifa.
Etihad Airways no mpitatitra saina faharoa an'ny Emira Arabo Mitambatra. Ny foiben-toerany dia ao amin'ny Tanànan'i Khalifa, Abu Dhabi, akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Abu Dhabi. Etihad dia nanomboka ny asany tamin'ny Novambra 2003. Izy io no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faharoa lehibe indrindra any UAE aorian'ny Emirates.